true understanding /zu-ZA/tools-for-life/understanding/steps/affinity-reality-and-communication.html read 3 4 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/understanding_zu_ZA.jpg Izingxenye zokuQonda
Ngenkathi njalo ungaxhumana nomunye umuntu ukuzama ukuxazulula izinkinga, kungaba nzima ukukhuluma nothile uma sekukhona inzondo noma ukwesaba okuthile phakathi kwakho nomuntu, noma kubonakala sengathi akubonakali okungokoqobo okuvamile okufanele kuxoxwe.
I-ARC Triangle ingakusiza ekuphenduleni le mibuzo: Kufanele ngikhulume kanjani nabantu? Ngingazithengisa kanjani izinto zabantu? Ngingabanikeza kanjani abantu imibono emisha? Ngingathola kanjani ukuthi abantu bacabangani mayelana? Ngingawusingatha kanjani kangcono umsebenzi wami?
Kususelwa ekutheni i-ARC Triangle isebenza kanjani, ngayona ndlela ongakwazi ngayo ukukhuluma nanoma imuphi umuntu ukuthi uthole into ethile yokuthanda ngaye futhi ngokuxoxa ngokuthile angavumelana nakho.
Uma unezinkinga ngokuthola umbono omusha wamukelwe noma oqondwa omunye umuntu lokhu kungenxa yokuthi awuzange uqale kuqala ukhulume ngezinto omunye umuntu angahle azazi ngokuthile. Kumele uqale usungule iqiniso ngokuthola okuthile enivumelana ngakho nobabili. Ngemuva kwalokho uzozama ukulinakekela liphakeme kakhulu izinga lokusondelana ngangokuthi kunokwenzeka ngokwazi ukuthi kunokuthile ongakuthanda ngaye. Futhi ke usuke usukwazi ngempela ukukhuluma naye. Uma ungaqalanga ukusungula okuthile okuthandayo ngaye nithole okuthile nobabili eningavumelana ngakho, ngeke kube lula ukukhuluma naye.
Ngokusebenzisa i-ARC Triangle, ungangeza noma uthole ikhono lakho lokulawula amathuluzi akho emsebenzini kanye nomdlandla wakho ngomsebenzi wakho. Ngesenzo sokuthinta amathuluzi akho omsebenzi futhi uwayeke ahambe, aphindaphindeke—ukuba nokuxhumana nawo—ungashintsha isimo sengqondo phambi komsebenzi wakho (wokusondelana) futhi ujwayele kakhulu (ngokweqiniso) amathuluzi akho.
Ukusetshenziswa kwe-ARC Triangle akunamkhawulo njengoba yakha isisekelo sokuqonda nokuphila uqobo.